Ohabolana 90 Akangalahy mandry andro : tsy nahiny ny voin-ko avy. [Veyrières 1913 #6198]
Ohabolana 133 Akoholahy tsy maneno anio , rahampitso mbola andro . [Veyrières 1913 #3449]
Ohabolana 164 Akondro jinjaina hariva : raha tsy malazon' ny andro aza, mantsasaky ny alina . [Veyrières 1913 #2582]
Ohabolana 197 Alaon' ny andro nampakarana anie aho, fa sady voky no tiam-bady . [Rinara 1974 #107]
Ohabolana 346 Amin' ny mazava ratsy . [Veyrières 1913 #6536]
Ohabolana 347 Amin' ny mipoaka andro . [Veyrières 1913]
Ohabolana 348 Amin' ny mitsidika andro . [Veyrières 1913 #6601]
Ohabolana 349 Amin' ny tafapaka andro . [Veyrières 1913]
Ohabolana 350 Amin' ny tolakolaka andro . [Veyrières 1913 #6603]
Ohabolana 389 Anaovana aro riaka raha maina andro , hialofana raha fahavaratra . [Rinara 1974 #204]
Ohabolana 459 Andraso ho folaka ny andro vao atao ny fandevenana . [Veyrières 1913 #2841]
Ohabolana 501 Andro mahatsara vahiny . [Veyrières 1913 #6539]
Ohabolana 502 Andro mandrorona. [Veyrières 1913 #6540]
Ohabolana 505 Andro misandratra . [Veyrières 1913 #6542]
Ohabolana 519 Andro velona tsy mandihy , ka mirakaraka volo vao mitsinjaka toa mpamosavy . [Rinara 1974 #245]
Ohabolana 594 Antoandro ny andro . [Veyrières 1913 #6547]
Ohabolana 625 Ao ihany ny andro mahory na be aza ny harena . [Rinara 1974 #316]
Ohabolana 680 Asaina andro , dia andro ; asaina alina , dia alina . [Veyrières 1913 #368]
Ohabolana 853 Aza atao toy ny vato tsindry ahazana , ka raha maloka ny andro atsipiny . [Houlder 1895 #589]
Ohabolana 920 Aza mamintana andro . [Veyrières 1913 #5250]
Ohabolana 969 Aza manao andro tsy maty . [Veyrières 1913 #2993]
Ohabolana 975 Aza manao antsolafaka . [Veyrières 1913 #621]
Ohabolana 1090 Aza manao masoandro ririnina , ka manjombona andro hihaonana ; fa aleo masoandro be lohataona , ka tsy mba manam- pahasosorana . [Houlder 1895]
Ohabolana 1151 Aza manao tanin' andron' andevolahy , ka ny kibo no atolotra andro. [Houlder 1895]
Ohabolana 1186 Aza manao tovolahy tia daka : ny andro hiainana mbola ho lava , fa ny tovon-karena ho lany . [Veyrières 1913 #1559]
Ohabolana 1233 Aza manasaika vilany mainty misy arina , fa mahamerik' andro . [Veyrières 1913 #3098]
Ohabolana 1295 Aza manjehy andro lava , fa ny anio aza tsy fantatra . [Rinara 1974 #688]
Ohabolana 1480 Aza mivadibadika toy ny andro ririnina . [Veyrières 1913 #5329]
Ohabolana 1498 Aza ny andro iray tsy lasana no anaovana ahy amboalambo . [Houlder 1895 #688]
Ohabolana 1503 Aza ny hafohezan' ny andro no alaina , fa ny halavan' ny taona . [Veyrières 1913]
Ohabolana 1549 Aza tsy sahy andro toa renivitsika . [Houlder 1895 #936, Rinara 1974 #823]
Ohabolana 1663 Bevohoka tsy mahalala andro , ka raha teraka izy, babena. [Houlder 1895]
Ohabolana 1704 Boka mihevo saha ka ny mamono dia no manariva andro . [Rinara 1974 #919]
Ohabolana 1728 Boka nangala- pihinana ka lany andro eo am-pisangian-takotra . [Rinara 1974 #938]
Ohabolana 1735 Boka nitolom-boatavo ka lava ny andro hifampitolomana . [Rinara 1974]
Ohabolana 1832 Donga andro anio hoatry ny lainga . [Veyrières 1913 #4917]
Ohabolana 1852 Dridran' Ingilo ka manonitra andro aman' alina . [Rinara 1974 #1015]
Ohabolana 1861 Efa harivariva ny andro . [Veyrières 1913 #6548]
Ohabolana 1916 Fahantitry ny andro, hariva. [Cousins 1871 #882]
Ohabolana 1940 Famaky tsy mahafira hazo : ampitso andro koa. [Veyrières 1913 #3672, Cousins 1871 #893]
Ohabolana 2015 Fantatro ihany ny mason' ny mpilefa , fa ny andro handehanany no tsy fantatro . [Veyrières 1913 #550, Cousins 1871]
Ohabolana 2154 Folaka ny andro ka malefaka ny lalana . [Rinara 1974]
Ohabolana 2241 Hainandro hariva ka ny avo no trany farany . [Rinara 1974 #1245]
Ohabolana 2467 Homan-tena hoatry ny tantely merik' andro . [Veyrières 1913]
Ohabolana 2474 Homeko azy ny anio tontolo andro , fa ny farany ho ahy. [Veyrières 1913 #3643]
Ohabolana 2549 Indray andro no manao vary amin-jabora ka manao tsy ho orin-daoka ! [Rinara 1974 #1425]
Ohabolana 2678 Izay manao ratsy : raha tsy malazon' ny andro , mantsasaky ny alina . [Houlder 1895 #1717, Veyrières 1913 #5662]
Ohabolana 2692 Izay miantso ny hafa manalina andro , fa ny havana tsy antsoina no manoina . [Veyrières 1913 #1085]
Ohabolana 2724 Izany Andriamasoandro , izany Andriambolana : mifoha maraina any an' ala , ka mitsidika andro any Arivo , ka mihilahila any Antongona . [Veyrières 1913 #3109]
Ohabolana 2740 Jamba mamintana andro : mahita masoandro ho an' olona , fa tsy mahita masoandro ho an-tena. [Rinara 1974]
Ohabolana 2899 Kibo noana tsy mangataka andro . [Rinara 1974 #111]
Ohabolana 2909 Kifafa ka miongana andro , miongana alina . [Rinara 1974 #1648]
Ohabolana 2983 Lalana mitsidik' andro . [Veyrières 1913 #6647]
Ohabolana 3000 Lamba malemy sy vary eran' ny vata , ka izay maharitra no herinandro . [Rinara 1974 #116]
Ohabolana 3057 Lany andro am-piresahana , ka tsy mitondra mody . [Houlder 1895 #734, Veyrières 1913 #3923, Rinara 1974 #1729]
Ohabolana 3109 Latsaka ny andro . [Veyrières 1913 #6552]
Ohabolana 3113 Lava andro anaovana ka fisa-drariny . [Houlder 1895 #1085, Veyrières 1913 #3344]
Ohabolana 3188 Lohataon-diavolana : ny miherika aza hitany. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 3194 Lokanga hisatra . [Veyrières 1913 #2716]
Ohabolana 3313 Mahita anay votsa vava ka mitati -kabary isan' andro . [Rinara 1974 #1885]
Ohabolana 3343 Maizina ny andro azo tsilovina , lalina ny hady , azo toharina , rangavina ny rano , azo lakanina . [Rinara 1974]
Ohabolana 3466 Manahy manana tahaka ny manam-damba jiafotsy amin' ny andro ririnina . [Rinara 1974 #1968]
Ohabolana 3473 Manala andro , hoy Rakoronana , varavaran-jozoro ka asiam-panalahidy ! [Rinara 1974 #1975]
Ohabolana 3602 Manao tanik' orana ny andro . [Veyrières 1913 #3116]
Ohabolana 3622 Manao vilaniben' Amboanjobe : tsy miherin' andro akory dia vaky . [Rinara 1974 #134]
Ohabolana 3634 Manaraka andro mody . [Veyrières 1913 #1835]
Ohabolana 3640 Manary andro toy ny lehilahy mitsongo anana . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 3648 Manasa lamba hariva : manaram-po am-panasana , fa kely andro anahazana . [Veyrières 1913 #6234, Cousins 1871 #1572]
Ohabolana 3705 Mandolo ny andro . [Veyrières 1913 #3119]
Ohabolana 3736 Mandringa be vatsy ka izay harivan' ny andro no handriana. [Rinara 1974 #139]
Ohabolana 3983 Matoatoa miseho andro: teo, fa lasa. [Cousins 1871, Veyrières 1913, Rinara 1974]
Ohabolana 4308 Misamonona andro aman' alina toa moka . [Rinara 1974 #2401]
Ohabolana 4320 Misasaka andro . [Veyrières 1913 #6581]
Ohabolana 4355 Mitafy lamba amin' ny andro ririnina , ka ny an' ny tena ihany no sambotsamborina vao azo. [Rinara 1974 #2432]
Ohabolana 4401 Mitoha tsy manana ohatra ny amboa , be fady andro toa kisoa . [Rinara 1974]
Ohabolana 4589 Mpanakalo rano merik' andro , ka izay rahampitso no asa fa ny anio hariam-potsiny . [Rinara 1974 #2570]
Ohabolana 4700 Na hevitra inona na hevitra inona no atao , ho avy ny andro farany . [Veyrières 1913 #2888]
Ohabolana 4871 Ny akoho no tsy nanidina : tsy nahandry ny andro zoma . [Rinara 1974 #2841]
Ohabolana 4883 Ny alahelo toy ny vary an-tsompitra : ahafahana iray fatambary n , ka ho levona ihany no farany . [Veyrières 1913 #2639, Cousins 1871]
Ohabolana 4916 Ny anaovana lalan-driaka raha main' andro , ny fahavaratra no tsy toha ; ary ny amonoan-tena andavanandro, ny andro iray no tsy laitra . [Veyrières 1913 #3133]
Ohabolana 4952 Ny andro fifaliana , tsy mahaleo ny andro fahoriana . [Rinara 1974]
Ohabolana 4954 Ny andro iray no ahitana ny atao ela. [Veyrières 1913 #5567]
Ohabolana 4955 Ny andro iray no tsy tanty . [Veyrières 1913 #2773, Cousins 1871]
Ohabolana 4956 Ny andro iray tsy iasana tsy maha-amboalambo . [Rinara 1974 #2885]
Ohabolana 5062 Ny fandroana no isan-taona fa ny fihavanana kosa isan' andro . [Rinara 1974 #2959]
Ohabolana 5135 Ny haingo natao ho zavatra, verin' ny vary masaka an-tava indray andro . [Rinara 1974 #3021]
Ohabolana 5199 Ny iasana ankehitriny, ny niasana taloha, ny hiasana any aoriana, ny fiasana isan' andro , ny fivelomana tsy azo avela . [Veyrières 1913 #3727]
Ohabolana 5240 Ny lainga mampisolantsolana andro ilazana , fa mampiondrika andro isehoany . [Veyrières 1913 #4940]
Ohabolana 5299 Ny manam-pitia tsy mba hariva na maizina aza ny andro . [Rinara 1974 #3102]
Ohabolana 5427 Ny olona ratsy mankasitraka ny andro anaovana . [Veyrières 1913]
Ohabolana 5912 Pai-panorona manala andro . [Rinara 1974 #3475]
Ohabolana 5970 Rafotsibe maty andro nandroana : sady tsy enina ny aty no tsy enina ny any Ambondrombe . [Rajemisa 1966]
Ohabolana 5977 Rafotsibe mitakarina ka lany andro eo am-piresahana . [Rinara 1974 #3516, Cousins 1871 #2611]
Ohabolana 5984 Rafotsibe nankatratra , ka lany andro am-pisikinana . [Veyrières 1913 #1917]
Ohabolana 5989 Rafotsibe no misikina dia mahatsiahy ny andro taloha (fony tanora ). [Rinara 1974 #3533]
Ohabolana 6005 Raha alakaosy andro mahery izy, dia asorotany hiarenana aho. [Rinara 1974 #3547]
Ohabolana 6090 Raha mandrivotra avy andrefana ny andro , hoy ny adala : manjaira sonina , fa ho avy ny valala . Hoy kosa ny anganongano : tampeno ny vava , fa tonga ny aretina . [Houlder 1895]
Ohabolana 6098 Raha merika ny andro , asan' ilay mpanana omby ; fa nony avy kosa ny songo, sambatra ilay mpanana omby . [Houlder 1895]
Ohabolana 6164 Raha tonga amin' ny fitotoam-bary ny andro . [Veyrières 1913 #6605]
Ohabolana 6165 Raha tonga izay fotoana , ka tapaka ny andro , dia iambohoana izao tontolo izao. [Veyrières 1913 #2916]
Ohabolana 6192 Raha vao mazava atsinanana ny andro . [Veyrières 1913 #6606]
Ohabolana 6244 Rangahibe no tratr' andro , Rafotsibe no nanadala azy. [Houlder 1895 #1950, Veyrières 1913 #1325]
Ohabolana 6414 Saingy atao hoe : antsiben' Andriamanitra , ka dia hanamerika andro . [Veyrières 1913 #6034, Rinara 1974 #3787, Cousins 1871]
Ohabolana 6602 Sitraka andro anaovana ohatra ny tongotr' omby mihosy . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 6624 Sodokan' ny andro diavolana , ka miainga misasakalina . [Rinara 1974 #3912]
Ohabolana 6657 Sola mielo diavolana , tsy tahotry ny danik' andro , fa fahazarana aninkeheo. [Rinara 1974 #3934]
Ohabolana 6713 Tafintohina mandon-tavy , ka merika ny andro. [Houlder 1895 #76, Veyrières 1913 #3141, Cousins 1871 #2952]
Ohabolana 6863 Tanin- andro . [Veyrières 1913 #3369]
Ohabolana 7087 Toha latsaka am-bovo : mazava andro idirana fa maizina andro ivoahana . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 7164 Toy ny saobakaka mitoetra ao am-body riana , ka tsy manana andro tsy ahatairana . [Houlder 1895 #922, Veyrières 1913 #5733]
Ohabolana 7239 Tomany andro avy orana, kanefa mainandro tsy miasa. [Cousins 1871 #3115, Nicol 1935 #192]
Ohabolana 7476 Tsy hita hanaovana , hoatry ny ondry kely sarak' andro : avela an-tanàna , ivorian' ny lalitra ; entina an-tsaha , iangonan' ny tsipolitra . [Veyrières 1913]
Ohabolana 7546 Tsy mahita fetry ny lanitra , tsy manjehy ny masoandro , tsy mandrefy ny tany . [Veyrières 1913 #262]
Ohabolana 7549 Tsy maintsy lena hoatry ny andro ririnina . [Veyrières 1913 #6094]
Ohabolana 7621 Tsy mena-mivadika toa andro ririnina . [Rinara 1974 #4579]
Ohabolana 7802 Tsy mitsinjo vody andro ho merika . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8248 Voalavo mandositra andro : mahin' ny fanahy ratsy natao alina . [Rinara 1974 #4971]
Ohabolana 8249 Voalavo mihazakazaka alina : tsy ny lalana no mahamaika , fa ny fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody . [Veyrières 1913 #4333, Cousins 1871 #3692]
Ohabolana 8251 Voalavo mitety vazan- trano misy saka , ka fohy andro andehanana . [Houlder 1895 #873, Veyrières 1913 #6334, Rinara 1974 #4975]
Ohabolana 8280 Voatsiroroka nosangorin' ny andro : ka tsy nariako, fa nanary tena . [Rinara 1974 #5002]
Ohabolana 8296 Volam-Bazaha tsy azo mandriandry . [Samson 1965 #V88]